Uwe mkpuchi friza → Uwe maka ime ụlọ oyi • Ihe mkpuchi kọmputa P&M
ngafe friza bụ uwe a raara nye na-arụ ọrụ na ọnọdụ ebe okpomọkụ na-agbadata -40 degrees C. Ndị a bụ ngwaahịa dị elu, jiri nnukwu nlekọta, nke gosipụtarala onwe ha n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Enwere ekele maka ọrụ ha, ndị ahịa si mba dị iche iche na-ahọrọ ha. Ọtụtụ mgbe a na-azụta ya na akpụkpọ ụkwụ na uwe aka. Anyị na-akwado uwe ime thermoactivenke g’eme zue aru aru oke oke okpomoku.
Coldstore CS-12 ụlọ ahịa oyi
Ndị ọrụ friza ọkachamara na asambodo
Na pm.com.pl, anyị na-enye friza ọkachamara na ụlọ ahịa mkpuchi oyi, nke a na-ahụkarị site na arụmọrụ na nhazi nke oge a. Modeldị kachasị ewu ewu bụ Stlọ ahịa Cold-CS-12 huu nchekwa na nkasi obi nke oru na nche kachasi elu.
Uwe mmiri nke otu nwere mpempe na-atụgharị uche maka ọhụhụ ka mma.
Ihe nlereanya a nwere zipa na ụkwụ na ọkara-gloves na mockups. Uwe na-ejide akwụkwọEkele nke ọ ga-eji na ebe okpomọkụ ruru -40 Celsius, na-echebe megide kọntaktị na convection oyi. Modeldị Coldstore CS-12 mejupụtara akwa polyester na-ekuru ume na-enweghị ntụpọ na mmiri na-asọ oyi. Site na usoro COLDSTROE, anyị na-enyekwa jaket COLDSTORE CS10 na uwe ogologo ọkpa COLDSTORE CS11.
Mkpuchi mkpuchi maka friza ma ọ bụ ụlọ oyi HI-GLO 40 nchebe ruo -83,3 ° C
Ọkachamara ọkachamara maka ụlọ ọrụ ndị ọkachamara
Modelsdị anyị na-enye nwere nkọwa zuru ezu. Na mgbakwunye, na ụdị Hi-Glo 40, anyị enyela asambodo na-egosi nrube isi na ọkọlọtọ UNE-EN 342: 2004 / AC: 2008. Ihe atụ a kpọtụrụ aha nwere 340 g nke mkpuchi ọkụ, ihe dị na mpụga bụ naịlọn, ma n'ime ya bụ nke polyester, ebe olu akwa nwere 280 g nke polyester ajị anụ. Ndị ahịa nwere ike ịlele ihe ejiri mepụta ngwaahịa ahụ, ụdị okpomọkụ ọ chọrọ maka yana ibu ahịa ngwaahịa enyere. Emere uwe ndị ahụ ka ha nwee ike iji ya rụọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ ma ghara igbochi mmegharị na-arụ ọrụ dị ka o kwere mee.
Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, biko kpọtụrụ ngalaba ọrụ ndị ahịa anyị, ndị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhọrọ uwe kwesịrị ekwesị maka friza na ụlọ ahịa oyi. Anyị na-enyekwa jaketị, uwe ogologo ọkpa, akpụkpọ ụkwụ, uwe.
oyi ụlọ coveralluwe maka obere okpomọkụUwe ejiji maka oge oyimkpuchi ọnụ ruo - ogo 40nchekwa edouwe ọrụAkwa ngwa nju oyiUwe mkpuchi ColdHi-Glo suutfriza coverallsụlọ ahịa oyiụlọ ahịa oyiUwe ụlọ ahịa oyiUwe ụlọ ahịa oyiuwe mgbochi